वैकल्पिक चिकित्सा – Health Post Nepal
प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीका दिन मनाइने धन्वन्तरि जयन्ती एवं आरोग्य दिवस आज विविध कार्यक्रम आयोजना गरी देशभर मनाइँदैछ। वन जङ्गलमा पाइने जडीबुटीमा आधारित प्राचीनतम् वैदिक चिकित्सापद्धति आयुर्वेदका प्रवर्तक भगवान् धन्वन्तरिको उत्पत्ति भएको सम्झनामा देशभर विविध कार्यक्रम गरी धन्वन्तरी...
चाहिने बेला बजारमा छैन वैद्यखानाको च्यवनप्रास
अनि स्वास्थ्य प्रवक्ताले ‘माफ गर्नुहोला’ भन्दै मुस्कुराए (भिडियो)
विष्णुहरी आचार्य रुपन्देहीका आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा योगीराजको नामले परिचित छन् । विहानको समय त्यहाँ रहेका संक्रमितका साथै क्वारेन्टाइनमा समय बिताउनुपर्ने व्यक्तिहरुसँग योगीराजको समय बित्ने गर्दछ । योगको अभ्यास गराउने काम उनको दैनिकीको पहिलो सिढीँ हो । आइसोलेसनको सुरक्षा घेराभित्र...
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले कोरोना भाइरस संक्रमितलाई आयुर्वेदिक औषधी वितरण सुरु गरेको छ। शंकरनगर स्थित आइसोलेसन सेन्टर र घरमैं आइसोलेसनमा बसेका कोरोना संक्रमितहरुलाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने औषधी वितरण गरेको हो। नगरपालिकामा बिहीबारसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या ९९ जना रहेकोमा ५३...
प्रदेश ५ का आयुर्वेद चिकित्सालयहरुले आयुर्वेदिक औषधीको उत्पादन गरिरहेको छन् । प्रदेश ५ सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटबाट आयुर्वेदिक चुर्णजन्य औषधीहरु उत्पादन गरिरहेको उनिहरुको भनाइ छ । अबका बर्षमा ति औषधीको उत्पादन बढाउने र त्यसलाई ब्रान्डिङ र लेवलिङ गर्ने योजना...
शिवलाई योगको सृष्टिकर्ता मानिन्छ। भगवान शिवको गाँजा, भाङ, धतुरो खाने, जिउमा खरानी घस्ने, बाघको छालाले जिउ ढाक्ने, कपाल लट्टा परेको ,घरबार केही नभएको जहाँ पायो त्यहाँ बस्ने डुली हिँडने रूपमा हिन्दु पौराणिक कथाहरूमा वर्णन गरिएको पाइन्छ। शिवका यी रूपहरूको...
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारी नियन्त्रणका लागि आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले कुनै सफलता हात पार्न सकेको छैन। वैज्ञानिकदेखि मानिसहरू उपचारका लागि अनेक खोज–अनुसन्धानमा लागिपरेका छन्। कोरोना...
योग प्राचिन समयदेखि नै शरीरलाई चुस्त दुरुस्त राख्न प्रयोग गरिँदै आएको छ। योगले मानव प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाइ राख्छ। यो कुरामा शायद कसैको पनि दुई मत नहोला। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि योग विज्ञान र अनुसन्धानमा आधारित छ, भन्ने कुरालाई...
कोरोना भाइरस महामारीको रूपमा फैलिरहँदा नेपालमा बेसारले खुबै चर्चा पाएको छ। संघीय संसदको दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्माले...
विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमण महामारीका रूपमा फैलिइरहेको छ। विश्वका वैज्ञानिक र विज्ञहरू भाइरसविरुद्धको औषधी र खोपको विकासमा तल्लिन छन्। तर जति नै मिहिनेत गरे पनि अहिलेसम्म भाइरसको नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने कुनै औषधी तथा खोपको विकास भइसकेको छैन। विश्वभरको...
प्रदेश ५ सरकारले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रका चिकित्सकलाई ‘फ्रन्ट लाइन’ मा उतार्ने भएको छ। आयुर्वेद चिकित्सामार्फत् रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन उनीहरूलाई परिचालन गरिन लागेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड–१९ लडाइँ प्रदेशभित्र प्रभावकारी बनाउन आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सक...
अहिले चीनको वुहान सहरबाट डिसेम्बर २०१९मा पहिचान गरिएको कोभिड-१९ को महामारी विश्वभर फैलिएको छ र हजारौंको ज्यान लिइसकेको छ। हालसम्म यसको प्रभावको आँकडा हेर्दा विकसित भनिएका राष्ट्रहरूलाई पनि नियन्त्रणमा ल्याउन निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। भाग्यवश नेपालमा यसले...
नेपालमा ‘गाँजा’को अध्ययन सुरु
नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैधता प्रदान गर्न संसदमा विधयेक दर्ता भएसँगै त्यसको विशेषताबारेमा अध्ययन सुरु भएको छ। आयुर्वेद तथा आधुनिक औषधिसँग सम्बन्धित बिषयका प्राध्यापक, बैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता तथा विद्यार्थीहरुको एउटा टोलीले यो विषयमा अनुसन्धान सुरु गरेका हुन्। यसलाई ‘नेपालमा गाँजाको अध्ययन’...
वडाअध्यक्षले नै भने, ‘आयुर्वेद भन्ने पनि रहेछ’
बाग्मती अञ्चल आयुर्वेद औषधालय प्राविधकको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ। २००८ सालमा स्थापना भएको औषधालयमा ६ जनाको दरबन्दी रहेको छ । जसमा बाहुल्यता प्राविधक तर्फकै छ । आयुर्वेद चिकित्सक, कविराज र वैध १–१ जना रहेका छन् भने प्राविधिक ३ जनाको...
कागती एक अमिलो जातको फल हो । कागती सानो र ठूलो बिभिन्न जातको हुन्छ । यसको बोक्रा, रस एवम् बिँया तथा पातसमेत विभिन्न रोगको उपचारमा काम आउँछ । यसको रस, पात र बोक्रलाई ताजा रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने...
प्रादेशिक आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बिजौरी दाङका निर्देशक रामकामेश्वर ठाकुरको तिहार तीन बर्षदेखि दाङमै बितेको छ । रौतहट जिल्ला घर भएका ठाकुर ३० बर्षदेखि स्वास्थ्य सेवामा छन् । उनी तीन बर्षदेखि बिजौरी दाङमा कार्यरत छन् । चिकित्सालयमा बिरामी भएपछि यो पटकको...
धन्वन्तरी जयन्तीमा देशभर राष्ट्रिय आरोग्य दिवस मनाइँदै
आज (शनिबार) देशभर धन्वन्तरी जयन्ती तथा राष्ट्रिय अरोग्य दिवस मनाइँदै छ । चिकित्सापद्धतिका प्रवर्तक देवका रूपमा पुजिने धन्वन्तरीको उत्पत्ति दिनका रूपमा प्रत्येक वर्ष कार्तिककृष्ण त्रयोदशीका दिन धन्वन्तरी दिवस मनाउँदै आइएको छ । यसै दिनलाई सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा राष्ट्रिय...
पोखराको प्रसिद्ध धार्मिक संस्था विन्ध्यवासिनी धार्मिक क्षेत्र विकास समितिले प्राकृतिक चिकित्सालय निर्माण गर्ने भएको छ । पोखरा–१ अधिकारी टोल नजिकैको गुठीबारी मार्गमा विन्ध्यवासिनी मन्दिरको नाममा रहेको २१ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको गुठी जग्गामा प्राकृतिक चिकित्सालय बनाउन लागिएको हो । उक्त...
पहिले जान्नुहोस्, स्वास्थ्यका लागि किन आवश्यक छ योगासन, त्यसपछि व्यस्त दैनिकीबाट १५ मिनेट भए पनि योगका लागि निकाल्नुहुनेछ र पाउनुहुनेछ अद्भुत लाभ । योगासन किन र कसरी फाइदाजनक छ ? योगासन शरीर र मन दुवैका लागि फाइदाजनक छ, यो...
रुपन्देहीका १६ स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई आयुर्वेद चिकित्साका विषयमा अभिमुखीकरण गरिएको छ । लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालयले बुटवलमा आयुर्वेदसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा सहभागीले प्राकृतिक चिकित्सासँग सम्बन्धित आयुर्वेदपद्धतिमार्फत दीर्घरोगको समेत उपचार हुने भएकाले त्यसतर्फ आकर्षण बढेको...
सामान्यतया शरीरका विभिन्न हाड तथा जोर्नीको दुखाइसम्बन्धी रोगलाई बाथरोग भन्ने गरिएको पाइन्छ । यस्ता जोर्नीका दुखाइ एकै प्रकारका नभएर विभिन्न प्रकारका हुने गर्छन् । सामान्यतया जोर्नीसम्बन्धी रोगलाई ३ प्रकारमा बाँड्न सकिन्छ : १. आमवात/जोर्नी सुन्निने, दुख्ने २. सन्धिवात/हड्डी खिइने...